Zikhala ngokuhlushwa amaphara izaguga | News24
Zikhala ngokuhlushwa amaphara izaguga
IZAGUGA ezihola impesheni ezihlala endaweni yaseMbali Unit 13 zithi zicela ukubuyiselwa ziyoholela ezikhungweni ngoba azikwazi ukubekezela ukuhlushwa amaphara edolobheni njalo uma ziyohola.
Lezi zaguga zithi seloku kwafakwa uhlelo olusha lokushintshwa kwamakhadi nokuthi baye kohola eposini izimpilo zabo zivele zanzima ngoba bagcina sebehlukenyezwa amaphara alala eduze kwaseposini elisemgwaqeni uLangalibalele nabathi ilona abalisebenzisa uma beyohola.
Ezinye izaguga ezikhulume ne-Echo zithe ziyabikelwa njalo uma ngabe zizoya kuyohola ngoba ziyazi zihambela ukuyohlukunyezwa.
UNkk Horonotha Dlamini (66) uthe njalo uma ngabe beyohola bafika ama phara esebeke inqwaba yamatshe lapho ekumele engabe babamba khona ulayini bese ebatshele ukuthi ngabe befuna ukuba ngaphambili kumele bakhokhe imali.
“Abanye bakutshela ukuthi kumele ukhokhe u-R20 kanti abanye bathi R10. Uma ngabe uthi awunayo uya ngemuva kulayini ngisho kuthiwa ufike kuqala ngoba bakutshela ukuthi bona babambe ulayini bazodlulisa abantu abakhokayo. Kwesinye isikhathi uma ngabe usuphuma ukuyohola bafuna ukukuphathisa ngenkani ngisho ungafuni ngoba befuna ukuthi ubakhokhele. Asizizwa siphephile kuleyandawo ngoba akukho bantu futhi akugadwa ngaphandle kanti kuyagcwala. Thina singabantu sesiyasaba nokuthi labafana bazogcina sebesibamba inkunzi,” kubeka yena.
Uphinde waveza ukuthi ngaphandle kokuhlushwa amaphara ziningi ezinye izinkinga ababhekana nazo okubalwa kuzona nokungabi khona kwezindawo zokuhlala kanye nokushiswa ilanga usuku lonke ngenxa yokuhamba kancane komsebenzi ngenxa yabantu abaningi.
UNkk Thandi Nsele (72) yena uthe kwesinye isikhathi useze akhethe ukuba athumele ingane yakhe ukuba iyomholela ezitolo ngoba esabela impilo yakhe futhi efuna nokonga imali yokuthi aqashe imoto yokuya edolobheni njengoba esengumuntu ongasakwazi ukuhamba.
“Uvuka ekuseni uye lapha ufike uhlale usuku lonke ushiswe ilanga ulinde ukuhola uma kubanda usuke ubulawa amakhaza khona. Nakuba lamakhadi esinawo manje esivumela ukuba sikwazi ukuyokhipha ezitolo inkinga esiba nayo ukuthi iningi lethu sesingabantu abadala kanti ngesikhathi ufika esitolo ufika usuyikhohliwe inamba ekumele ukhiphe ngayo imali bese bayakujikisa. Singakujabulela kakhulu ukubuyiselwa ezikhungweni zethu ngoba besazi khona ukuthi siphephile futhi kunabantu abasigadile,” kubeka yena.
Ikhansela laka-ward 17 uMnuz Thamsanqa Sithole uthe uyazazi izinkinga ezibhekene nogogo bakule ndawo uma ngabe beyohola wathi basazama ukuthola indlela yokuthi angeke yini mhlawumbe bakwazi ukubuyiselwa ezikhungweni.
“Siyazi ukuthi lesi isinqumo esathathwa kuzwelonke ngakho ke ngeke size sithembise ukuthi bazobuyiselwa kodwa sizozama. Into esingabayala ngayo nje abantu abadala ukuthi kumele bazame ukuthi bayohola imali yabo ezitolo ngoba kuphephile futhi kuyashesha kodwa benze isiqiniseko sokuthi abavumeli noma ubani ukuba abasize ngoba bangagcina sebelahlekelwe iyona yonke imali yabo,” kubeka yena.
Okhulumela iposi esifundazweni saKwaZulu-Natal uNks Nobuhle Njapha uthe bebengazi ukuthi kunenkinga efana nalena kodwa bazoxhumana nabaphathi balo iposi laseMgungundlovu.
Abanye bakutshela ukuthi kumele ukhokhe u-R20 kanti abanye bathi R10. Uma ngabe uthi awunayo uya ngemuva kulayini ngisho kuthiwa ufike kuqala ngoba bakutshela ukuthi bona babambe ulayini bazodlulisa abantu abakhokayo.